XOG: Jabuuti oo ku lug yeelaneysa dadaalada lagu joojinayo dagaalka Tukaraq & fariin loo diray Biixi & Gaas. – Xeernews24
XOG: Jabuuti oo ku lug yeelaneysa dadaalada lagu joojinayo dagaalka Tukaraq & fariin loo diray Biixi & Gaas.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa si gaar ah madaxweynaha Jabuuti Mudane Cismaaciil Cumar Geelle ugala hadlay inuu gacan ka geysto sidii lagu qaboojin lahaa Xiisadda ka taagan Tukaraq ee u dhaxeeya Ciidamada Somaliland iyo Puntland.
Mudane: Xasan Cali Kheyre oo safar shaqo oo horay loo shaacin ku jooga magaalada DJabuuti,ayaa madaxtooyada dalkaasi kula kulmay madaxweyne Geelle,isagoo Arrimaha uu kala hadlay ay ka mid yihiin Xaaladda Tukaraq iyo sida Dowladda Jabuuti uga qeyb qaadan karto Xasilinta Gobolka Sool.
Dowladda Jabuuti ayaa saaxiib dhow la ah Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamul Gobolleedyada,waxaana suurta gal ah iney ku lug yeelato dadaalada lagu doonayo in lagu xasiliyo deegaanada Gobolka Sool ee dirirta ka socoto.
Deegaanka Tukaraq ee deegaano kale oo ka tirsan Gobolka Sool,ayaaa waxaa ka taagan Xiisad dagaal oo u dhaxeeya Maamulada Puntland iyo Somaliland,waxayna isku heystaan gacan ku heynta deegaanadaasi.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horay ugu baaqday in si sharuud la’aan ah lagu joojiyo dagaalada ka socda deegaanadaasi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/06/xog-cusub.jpg 137 367 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-07 23:08:512018-06-07 23:28:29XOG: Jabuuti oo ku lug yeelaneysa dadaalada lagu joojinayo dagaalka Tukaraq & fariin loo diray Biixi & Gaas.
Raysalwasaaraha Ethoipia Dr Aby ayaa hada Xilkii ka Xayuubiyay Jeneraaladii... Golaha Ammaanka ee UN-ka oo ka digay in midnimada Soomaaliya ay halis ku ji...